Uma ecabanga lapho Abkhazia kufanele siphumule ne izingane, qiniseka ukuthi aqale, ukuthi kunengqondo ukuya kuleli zwe emangalisayo ngenzalo abasha. Abkhazia - ezweni izihambi, okungenani namuhla, futhi mayelana nokuphepha kwezingane lapha kudingeke sikhathazeke iyiphi ngaphezu kwanoma yimuphi omunye resort. Nokho, kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kudingeka afune uma ekhetha kuphi e Abkhazia kufanele siphumule nezingane.
Okokuqala, uma sithembele emfushane isonto lonke iholide, izindlalifa abasha kuleli zwe Kuhle ukungayidli nabo bonke. Into wukuthi kule ndawo I Black Sea has a acclimatization eside kakhulu. Ngokuvamile, ngesikhathi kuqala eziyishumi (!) Izinsuku izingane ukuphumula awukwazi ukujabulela ngokugcwele izici sezulu ukuphulukiswa entabeni-ulwandle. Sonke leso sikhathi, umzimba wabo uvuma ezinhlotsheni engavamile imvelo yangaphandle. Ngakho-ke, uma uya e ingane Abkhazia sinombono ngcono yayo, alindele iholide okungenani inyanga eyodwa.
Okwesibili, Abkhazia - ezweni lapho isimo sezulu ngisho ezishisayo nasehlobo (July-August) ungashintsha kakhulu kakhulu. Ngokwesibonelo, ekuseni sasishisa futhi isibhakabhaka Licwathile, futhi eyodla - akukho kuka 15 centigrade, umoya onamandla nemvula. Ngaphezu kwalokho, ebusuku ezintabeni ezibandayo ngisho ehlobo. Ngakho-ke, uma ekhetha kuphi Abkhazia kufanele siphumule nezingane, noma kunjalo, kudingeka unakekele izingubo nezicathulo uma sezulu ezahlukene.
Okwesithathu, uma uhlela ukuhlala Abkhazia nengane, kufanele unake okukhethekile ekudleni kwakhe. Cishe, ngeke bakwazi ukudla nawe amathilomu zendawo zokudlela. Iqiniso ukuthi Abkhaz cuisine izitsha simnandi kakhulu, kodwa ngenxa kobukhulu lelitfutfukile amafutha kantsi asihambisani kahle ekudleni izingane zethu. Ngakho-ke, lapho sinquma kuphi e Abkhazia kufanele siphumule nezingane, khetha impesheni ibalwa izivakashi isiRashiya, lapho ungaba evamile kithi ukudla, noma ukubheja ngokwakho amakhono abo Culinary, ukuthatha indawo yokuhlala engxenyeni ezimele.
Uma izincomo ezingenhla balethusele, ungaya ngokuphepha esohambeni, ekupheleni ozosithola izwe elehlukile - Abkhazia. Lapho bangabeki nengane, unganquma kanjani kusengaphambili ekhaya lapho ngifika kwakhe. Inketho zokugcina abantu abakhetha ukuhlala ezizimele. Kulokhu, uzokwazi ukupheka ukudla okumnandi nge imikhiqizo fresh ukuthi ungakwazi ukuthenga ngemali ephansi kusukela Sebawoti wokungenisa izihambi. Futhi ungacabangi ukuthi abahlala emzini womzalwane endaweni ethile ezintabeni kuyoba yisicefe izingane. Kunalokho, ukuphila bendawo uhlukile, nenzalo yakho balinde kwalibaleka yemihlatshelo nemvelo.
Kulabo abakhetha iholidi ophucukile xaxa, kunengqondo ukuhlala kwelinye zokungcebeleka eziningi ezisakazeke ogwini ogwini Black Sea. It unikeza ahlanzekile amabhishi itshana futhi enhle Black Sea. Lapho sinquma kuphi aphumule Abkhazia, umuntu akufanele ukhohlwe ukuthi kuleli zwe anganika hhayi kuphela eliphezulu lolwandle iholide, kodwa futhi indawo, futhi sakujabulela guided - kukhona okuningi ezikhangayo zomlando. Ngaphezu kwalokho, e Abkhazia namuhla has 170 iziphethu, amanzi awekho wawungaphansi abaziwa umhlaba wonke ngezici zawo, njengokuthi "Borjomi" futhi "Narzan". Ngakho kuleli zwe ayikwazi nje jabula ukuze sunbathe zibhukude kolwandle, kodwa futhi ukuba bajwayelane isiko ethakazelisayo, futhi bathuthukise impilo yabo.